कसरी दिइँदै छ बेलायतमा कोरोना विरुद्धको खोप ? | We Nepali
२०७७ मंसिर १९ गते १०:२६
लण्डन । कोरोना भाइरसविरुद्ध विकसित गरिएको खोप पहिलो पटक आममानिसमा आउँदो मंगलबार बेलायतमा दिइँदै छ ।
ओैषधि निर्माता फाइजर र बायोएनटेकले संयुक्त रुपमा विकास गरेको सो खोपको डोज बिहीबार साँझ बेल्जियमबाट स्थलमार्ग हुँदै बेलायत आइसकेको छ भने बेलायत सरकारले सो खोप दिनका लागि ५० वटा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) ट्रष्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यतिबेला सर्वसाधारणको मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ खोप लगाउने मानिसहरु कसरी छनौट गरिन्छ ?
एनएचएस प्रोभाइडर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्रिस होपसनका अनुसार ५० वटा एनएचएस ट्रष्टहरुले अहिले पहिलो चरणमा आफ्नो क्षेत्रका केयर होम र स्थानीय निकायसित केयर होमका बासिन्दा र उनीहरुका रेखदेखकर्ताहरुलाई खोप लगाउन आउन समन्वय गरिरहेका छन् । त्यसपछि अस्पतालहरुले ८० वर्षमाथिका मानिसहरुको पहिचान गर्नेछन् र उनीहरुलाई खोप लगाउनका लागि बोलाउने छन् । यसरी खोप लगाउनेहरुमा अधिकांश अस्पतालका बहिरंग र अन्तरंग सेवा लिइरहेका बिरामीहरु हुनेछन् ।
अस्पतालहरुले पहिलो डोज खोप लिएकाहरुलाई तीन सातापछि अर्को डोज लिन आउन भन्नेछन् ।
यसअघि संयुक्त खोप तथा प्रतिरक्षा समितिले कसले पहिले खोप पाउने भन्ने बारेमा प्राथमिकताको सूची बनाएको छ । जसअनुसार शुरुमा केयर होमका बसिरहेका वृद्धावस्थाका मानिस र उनीहरुका रेखदेखकर्ताले पाउने छन् । त्यसपछिको प्राथमिकता ८० वर्ष वा सो भन्दा माथिको उमेर माथिका सबै मानिसहरु तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरुलाई दिइएको छ ।
त्यसपछि ७५ वर्ष वा सो भन्दा माथिका उमेरका मानिसहरुलाई खोप दिइनेछ । उनीहरुपछि ७० वर्ष उमेर पुगेका वा सोभन्दा माथिका र अति गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई खोप दिइनेछ । त्यसपछिको पालो ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिकाहरुलाई दिइनेछ । उनीहरुपछि १६ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका तर स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई खोप दिइनेछ । त्यसपछि ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिकालाई र त्यसपछि ५५ वर्ष वा सोभन्दा माथिकालाई खोप दिइने छ ।